စိုင်းထီးဆိုင် | Myanmar Mp3 Album
ချစ်..ကောင်လေး – ဟေမာနေဝင်း
ဟေမာနေ၀င်း …. ချစ် ..ကောင်လေး ( စိုင်းထီးဆိုင် ၊ ဇော်ဝင်းရှိန် ၊ ဂျက်မြသောင်း ) တေးဂီတ ………. L.P.J , The Rays , T.4 အသံဖမ်း ………. တိုနီ ၊ လင်း ၊ မူပိုင် …………… သ၇ဖီ တေးသံသွင်း ဖြန့် ချီေ၇း …….. ဒဂုံ တေးသံသွင်း ၊ လှိုင်း ( မန္တလေး ) ၀၁ ချစ်ကောင်လေး ………………………………………. ဟေမာနေ၀င်း ၀၂ မဆိုင်ဘူး ………………………………………………. ဟေမာနေ၀င်း ၀၃ သိရဲ့ လား ……………………………………………… ဂျက်မြသောင်း ၀၄ မပြောနဲ့ နော် … Continue Reading →
March 24, 2013 Snuo Mwoani စိုင်းထီးဆိုင် ဂျက်မြသောင်း ဇော်ဝင်းရှိန် ဟေမာနေ၀င်း Leaveacomment
ချစ်ပြုံးစီခြယ် ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း လာချော့လှည့်တော့ကွယ် မပန်းရယ် မငိုနဲ့ မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး နေခြည်ထိပ်ထား နှင်းပွင့်သစ္စာ ပန်းဘုရင်မလေး သဇင် သူဒါတွေမသိပါ သူသတိရရ မရရ တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်>> Myanmar Online Music ဒေါင်းလုပ်ရန်>> Mediafire
June 18, 2012 Myanmar Online Music အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် Leaveacomment
စိုင်းထီးဆိုင် – အချစ်ဖိတ်စာ
ဒီ စိုင်းထီးဆိုင် – အချစ်ဖိတ်စာ အယ်ဗမ်လေး ဒီ MMA မှာ မတွေ့လို့ ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းကောင်းစဉ် သိရင်လဲကူသီပေးကြပါနော်…ကျေးဇူးပါ… တိုင်ရိုက်နားစဉ်ရန်>>
May 28, 2012 Myanmar Online Music အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် Leaveacomment
စိုင်းထီးဆိုင် – ဘ၀မီးအိမ်
ဒီ MMA မှာဒီ အယ်ဘမ် မတွေ့လို့ ရှဲပေးလိုက်တယ်။ သီချင်းနာမည်တွေတော့ သိရင်ကူရှဲပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်နားစဉ်ရန်>> Myanmar Online Music ဒေါင်းလုပ်ရန်>> Mediafire
May 21, 2012 Myanmar Online Music အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် 1 Comment
ခင်မောင်တိုး၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခိုင်ထူး – သမုဒယကြိုးသုံးပင်
L>ownload Credit : MMCP
August 2, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) စိုင်းထီးဆိုင် ခိုင်ထူး ခင်မောင်တိုး 1 Comment
စိုင်းထီးဆိုင် – ငယ်ချစ်ဦး
၀၁။ ၀၂။ ၀၃။ ၀၄။ ၀၅။ ၀၆။ ၀၇။ ၀၈။ ၀၉။ ၁၀။ ငယ်ချစ်ဦး ၁၁။ ၁၂။
December 25, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် Leaveacomment
စိုင်းထီးဆိုင် – လက်ရွေးစင်တေး MP3 နှင့် ဗွီဒီယို(အပိုင်း-၁)
Download Mediafire ၀၁။အချစ်ကိုဦးစားပေးခဲ့သူ ၀၂။ချယ်ရီကိုသာပန်ပါကွယ် ၀၃။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး ၀၄။စိတ္တဇအလွမ်း ၀၅။ဆုတောင်းခဲ့ဘူးတယ်မိငယ် ၀၆။ငါ့ဘဝ ၀၇။အချစ်ဆိုတဲ့အရသာ ၀၈။မောင့်လပြည့်ဝန်း ၀၉။ကိုယ့်အနေနဲ့ဘဲချစ်ပါ ၁၀။ဒီဆောင်းတစ်ည ၁၁။နေရစ်တော့ကွယ်သွားတော့မယ် ၁၂။အရင်လိုဘဝမျိုးရောက်ချင်တယ် Download MP3 1 – 12 ၁၃။မန္တလေးရောက်ရှမ်းတစ်ယောက် ၁၄။ဒိထက်ပိုပြီးမတတ်နိုင်ဘူး ၁၅။နှုတ်ဆက်ခြင်း ၁၆။မိုးထိအောင်မည်ရှမ်းအိုးစည် ၁၇။ရခွင့် ၁၈။ငိုမနေနဲ့အပိုဘဲ ၁၉။အပြာရောင်မျက်ရည် ၂၀။ရေဆန်မှာချော ရေစုန်မှာမျော ၂၁။ရှမ်းရိုးမကအိုးစည်သံ ၂၂။တစ်ယောက်သောသူ့အနမ်း ၂၃။နေရာတုင်းမှာ ၂၄။အဆုံးအဖြတ် Download MP3 13 – 24 ၂၅။ကြားလူဖျက်လို့ပျက်မှာစိုး ၂၆။ကြင်ဖူးစာမမည်လို့ဘဲလား ၂၇။လေညာအရပ်ကအချစ် ၂၈။ဗိဿနိုး၏သူရဲကောင်း ၂၉။ကျေနပ်ပါတော့ ၃၀။သိပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့နွဲ့တင် ၃၁။ငယ်ချစ်ဦး ၃၂။မောင့်တစ်ပါတ်နွမ်း ၃၃။မြင့်မိုရ်မို့လား ၃၄။သံယောစဉ်ကုန်တဲ့စကားတော့မပြောပါနဲ့ ၃၅။မိုးမလင်းသေးဘူးအိပ်ဦး ၃၆။အချစ်ထက်မကတဲ့ကိုယ်ချင်းစာ Download MP3 25 – 36
December 18, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင်2Comments
စိုင်းထီးဆိုင် – လက်ရွေးစင်တေး MP3 နှင့် ဗွီဒီယို(အပိုင်း-၂)
Download Video ၀၁။ အချစ်ကမင်းအနားမှာပါ ၀၂။ သခင့်ဆီအပြေးပြန်လာမည် ၀၃။ ရတနာ ၀၄။ လမ်းခွဲမှာကျန်ကာနေရစ်တော့ ၀၅။ ချယ်ရီပင်အောက်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တဲ့ထိ ၀၆။ သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ် ၀၇။ ခွင့်မတောင်းပေမယ့်ရပါတယ် ၀၈။ နွေနံနက်ခင်း ၀၉။ ခွဲစိတ်ခန်းကဆရာမလေး ၁၀။ မေမြို့မိုး ၁၁။ မောင်မနေတတ်ဘူး ၁၂။ တို့တောင်ပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Download MP3 1 – 12 Download Video ၁၃။ ချစ်တာတစ်ခုထဲသိတယ် ၁၄။ ခြင်္သေ့လည်ပြန် ၁၅။ မေတ္တာရေစုန်မျောခဲ့သူ ၁၆။ နေ့သစ် ၁၇။ ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း ၁၈။ ရှမ်းပဲပုတ်လေး ၁၉။ ရိုးရာမပျက်တဲ့မြေ ၂၀။ စဉ်းစားပါဦး ၂၁။ ရာသီပြောင်းချိန် ၂၂။ ရေလိုက်ငါးလိုက် ၂၃။ အချစ်ဆိုတာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ … Continue Reading →
December 17, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် Media2Comments
စိုင်းထီးဆိုင် – တောင်တန်းမြေမှတေး
ီသီချင်းဖိုင် ဆွဲယူရန် သီချင်းတွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်များကိုမသိပါ။
November 30, 2010 mars အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် 1 Comment
Mediafire ရော ifile.it ပါတင်ပေးထားပါတယ် password = yeewaiag
September 20, 2010 Yee Wai Aung ကြိုးကြာ အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စိုင်းထီးဆိုင် ထူးအိမ်သင် ပိုးဒါလီသိန်းတန် ၀ိုင်ဝိုင်း Lဆိုင်းဇီ Rဇာနည် NG2K7Comments